10 shampoos na conditioners kacha mma 2-in-1
[ad_1] Ị bụ otu n'ime ndị na -agba ọsọ n'ụtụtụ? Ị kpọrọ asị ichere ka ihe na -ehicha oyi na -enye ume mgbe ị sachara ntutu gị? Ọ bụrụ otu a, ọ dabara nke ọma maka gị, enwere ọtụtụ ngwaahịa nlekọta ntutu si ebe ahụ na -asachapụ ma na -edozi ntutu gị n'otu oge. Ị… Gaa n'ihu Ọgụgụ 10 shampoos na conditioners kacha mma 2-in-1
bipụtara 15 September 2021
Edebere dika Mma
Ọmarịcha kpakpando 10 ndị lọtara mgbe ha nwusịrị
[ad_1] NSW Gịnị kpatara Alison Porter ji pụọ na enyo mgbe ihe ịga nke ọma Curly Sue mechara, gịnị ka Svetlana Loboda mere mgbe ọ hapụrụ otu VIA GRA, kedu ka Andie MacDowell si nwee ike 'ịlaghachi azụ' site na onye na -eme ihe nkiri gaa n'ụdị? Ọmarịcha kpakpando 10 ndị laghachiri ewu ewu mgbe ha nwusịrị. Svetlana Loboda “Mmadụ niile… Gaa n'ihu Ọgụgụ Ọmarịcha kpakpando 10 ndị lọtara mgbe ha nwusịrị
bipụtara 10 September 2021
5 ihu serums m ga -azụta ọzọ
[ad_1] BT ekele maka ngwaahịa ndị a, akwụsịrị m iche echiche banyere ntọala na ndụ kwa ụbọchị, bulie nlekọta abalị zuru oke (na -enweghị akpụkpọ mmanye n'ụtụtụ), echefuru banyere ịchacha ma na -eme ka usoro ịma mma m kwa ụbọchị dị mfe dịka o kwere mee - ọ bụrụ otu n'ime ọgwụgwọ gị bụ ọgwụ ihu, ihe ọ bụla ga -eso. Ihe niile… Gaa n'ihu Ọgụgụ 5 ihu serums m ga -azụta ọzọ
kedu ka ude ndị nne anyị dị ugbu a?
[ad_1] Akara BAchromin maara onye ọ bụla nwere mmasị na nsogbu nke nchacha akpụkpọ. Ma ọ bụrụ na ị nụbeghị gbasara ya na mberede, jụọ nne gị - ọ maara n'ezie. Naanị otu ude maka ntụpọ afọ Achromin, nke ụmụ nwanyị nọ na USSR, bụ onye Bulgarian mepụtara… Gaa n'ihu Ọgụgụ kedu ka ude ndị nne anyị dị ugbu a?
35 ụmụ nwanyị na -eme egwuregwu mara mma nke oge anyị
[ad_1] Ndị na -eme egwuregwu mmega ahụ HF na -eme ya mgbe ngwụcha egwuregwu egwuregwu ha gasịrị, kedu ihe onye egwuregwu bọọlụ kacha mara mma na Russia dị ka ya? Akụkụ ikpeazụ nke akụkọ gbasara ụmụ agbọghọ mara mma n'egwuregwu. Nke mbụ na nke abụọ gụọ akụkụ ndị ahụ na njikọ. Margarita Mamun Margarita Mamun ugboro asaa ghọrọ onye mmeri ụwa… Gaa n'ihu Ọgụgụ 35 ụmụ nwanyị na -eme egwuregwu mara mma nke oge anyị
Ngwa ntutu 5 m na -azụta ugboro ugboro
[ad_1] Ncha ntutu dị ncha, ihe na -agba agba mara mma, mousse na -eme mkpọtụ na ngwaahịa ndị ọzọ m na -eji ruo ọdịda ikpeazụ. Sofia Vorobyova BeautyHack Editor Shampoo iji gbakwunye olu na ntutu Extra Volume Shampoo na smoothing conditioner Smoothing Conditioner, Moroccanoil Ụdị Moroccanoil nke Israel na -azọpụta ntutu m site na nkụ na isi ike ruo ihe dị ka afọ atọ.… Gaa n'ihu Ọgụgụ Ngwa ntutu 5 m na -azụta ugboro ugboro
40 ọcha ntu ntu ịkpụcha mbọ aka
[ad_1] 40 ntu ntu manicure ntu ntu [ad_2]
Ọrụ 8 kachasị mma nke Angelina Jolie
[ad_1] V Na mbido ọrụ ya, nwanyị kachasị maa mma n'ụwa, dị ka akwụkwọ akụkọ Vanity Fair si kwuo, kama iji uwe ojii tii, jere ogologo ọkpa akpụkpọ anụ na kapeeti uhie. Ọrụ dị na fim ahụ dabara adaba: Gia - ụdị ejiji nwere psyche na -akwụghị chịm, mara mma nke ukwuu Lara Croft, nwa ewu Kate… Gaa n'ihu Ọgụgụ Ọrụ 8 kachasị mma nke Angelina Jolie
Nhọrọ nhọrọ manicure 20 na -eme ka mbọ gị gbatịkwuo
[ad_1] Nhọrọ manicure iri abụọ na -agbatị mbọ gị [ad_20]
Eziokwu 10 ị maghị maka Elizabeth II
[ad_1] TOQueen nke Great Britain bụ eze kachasị ogologo n'ime ndị dị ndụ. Julaị mere emume ncheta afọ 65 nke echichi ya. N'ime oge a, Elizabeth II jisiri ike zaa nde leta 3.5, mara pope asaa ahụ wee chịkọta mkpokọta okpu 5,000. Ihe kacha atọ ụtọ gbasara eze nwanyị nọ na… Gaa n'ihu Ọgụgụ Eziokwu 10 ị maghị maka Elizabeth II
20 kpakpando ndị na -eyi enyo mana ị maghị ya
[ad_1] DFor kapeeti na -acha ọbara ọbara, ha na -ahọrọ anya m, na oge efu ha site na ịse ihe nkiri na ihe omume mmekọrịta, ha na -eji mpako eyi enyo enyo. N'ime nhọrọ pụrụ iche nke BeautyHack enwere kpakpando ndị na-anaghị atụ egwu ịbụ ndị akpọrọ "anya anọ". Kwere m, ndepụta ahụ ga -adị oke egwu ma ọ bụrụ na ọtụtụ ndị emeghị eme… Gaa n'ihu Ọgụgụ 20 kpakpando ndị na -eyi enyo mana ị maghị ya
Kwụsị! Ụdị edozi isi 8 na -adị oke egwu
[ad_1] Kwụsị! Ntutu isi 8 nke na -akacha njọ [ad_2]
Ihe onyonyo TV nke Brazil nke mebiri ndekọ n'ihe gbasara ndị na -ekiri ya
[ad_1] Site na "Ndị ohu nke Izaura" ruo "Ọdịmma Brazil"! Na BeautyHack - usoro onyonyo TV kacha mma na Brazil maka afọ 36, nke a na -agbasa na Russia. “Ohu Izaura” usoro a malitere na Ọktoba 11, 1976. Na USSR, egosiri “Ohu Izaura” naanị na 1988 - ọ bụ opera ncha mbụ na telivishọn Soviet.… Gaa n'ihu Ọgụgụ Ihe onyonyo TV nke Brazil nke mebiri ndekọ n'ihe gbasara ndị na -ekiri ya
20 edozi isi edozi isi maka ntutu dị mma
[ad_1] BeautyHack achịkọtara nhọrọ nke edozi isi ndị ama ama na -aga nke ọma na -eketa eriri dị mkpa. Na ndị stylists na trichologists kwuru ka esi elekọta ntutu dị otú ahụ yana ihe ị ga -eme nhazi. Vyacheslav Gordeev Top stylist nke Nikolskaya Club salon Salty Dog Cocktail Beach Spray, Evo na -enyere m aka ịtụgharị ntutu isi ka ọ bụrụ nnukwu ọkụ… Gaa n'ihu Ọgụgụ 20 edozi isi edozi isi maka ntutu dị mma
5 ntụ ntụ ihu kacha mma dị ka ndị na -agụ BeautyHack si kwuo
[ad_1] Ego sitere na 799 ruo 4,000 rubles, nke ndị na -agụ BeautyHack na -eji kemgbe ọtụtụ afọ! Kọmpat ntụpọ Prisme Visage, Givenchy Natalia Mikhalyuk-Nehme Ọtụtụ afọ gafere, ngwugwu Prisme Visage na-agbanwe, na ntụ ntụ ka bụ ọkacha mmasị nke ọtụtụ ụmụ agbọghọ. M ga -amalite site na imewe nke onye na -ere ahịa kacha mma n'ụwa ịchọ mma ịchọ mma.… Gaa n'ihu Ọgụgụ 5 ntụ ntụ ihu kacha mma dị ka ndị na -agụ BeautyHack si kwuo
Ịga n'ihu ara: kpakpando 8 nwere mammoplasty dara ada
[ad_1] Gaa n'ihu ara: kpakpando 8 nwere mammoplasty dara ada [ad_2]
Nhọrọ 15 kachasị mma site na kpakpando
[ad_1] echiche 15 sitere na kapeeti uhie, dị mkpa na ndụ n'ezie. Atụmatụ ndụmọdụ etemeete gụnyere! Nhazi etemeete Hayley Bieber, dị ka nke Hailey, na -enweta ume ozugbo, na -eme ka ọ zuo oke maka azụmaahịa kacha sie ike na Mọnde niile. Onye na -eme etemeete Ksenia Nikitina na -adụ ọdụ itinye ntọala Urban decay n'okpuru ndò. “Ha na -edobe ndò ha nke ọma ruo awa 24. Ahụrụ m satin… Gaa n'ihu Ọgụgụ Nhọrọ 15 kachasị mma site na kpakpando
Roman Moiseenko - ihe dị ka mmejọ isii nke ị na -eme
[ad_1] ROman Moiseenko bụ otu n'ime ndị na -edozi isi na stylist ama ama na Russia. Ọ rụrụ ọrụ na nnukwu ọrụ dị ka "Ụlọ ọrụ kpakpando", "Onye na-ese mmadụ", bụ onye na-akwado mmemme "Wepụ ya ozugbo" na STS. Roman gwara BeautyHack otu esi ehicha ntutu gị nke ọma, gịnị kpatara ị ga -eji gbanwee nkewa na ihe… Gaa n'ihu Ọgụgụ Roman Moiseenko - ihe dị ka mmejọ isii nke ị na -eme
kedu ka m siri kpụọ ntutu m na etemeete m na Art'Up salon
[ad_1] Gthe heroine of the BeautyHack project Katya nọrọ ọtụtụ awa na Salon Art'Up na ọdọ mmiri ndị nna ochie, ebe o nwetara ntutu ọhụrụ na ihe ọhụrụ, na mmetụta ya, etemeete. Stylist Eldar Adraev na onye ntụzi nka nke Art'Up omenka Alena Lapina na-ekwu maka nnwale ha. Tupu mgbe Eldar Adraev onye ọkaibe kacha elu nke Art'Up ịma mma… Gaa n'ihu Ọgụgụ kedu ka m siri kpụọ ntutu m na etemeete m na Art'Up salon
Ndụmọdụ BeautyHack nke izu: Were saa nnu
[ad_1] Ewepụla oge maka ụdị mkparị a (ọkachasị ndị bi n'obodo mepere emepe)! Ọ bụrụ na oyi na -atụ gị, ike gwụrụ gị, na -agbasasị na nchekasị, nwee mmetụta na akpụkpọ ahụ akpọọla nkụ, na -arụbiga ọrụ ókè na ọzụzụ - saa ahụ ma jiri nnu kachasị amasị gị. Site n'aka ndị ọkachamara na BeautyHack - nhọrọ isii egosipụtara. Nke mbụ,… Gaa n'ihu Ọgụgụ Ndụmọdụ BeautyHack nke izu: Were saa nnu
nnwale nke usoro ịkpụ ahụ na -enweghị mgbu
[ad_1] GBeautyHack Master Editor Karina Andreeva gara ụlọ ebe a na -achọ mma “Millefeuille» Na Frunzenskaya, nwalere usoro ahụ iri na ngwa Iason Laser nke Italiantali wee kerịta echiche ya. Agaghị m agha ụgha ma ọ bụrụ na m kwuo na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nwanyị ọ bụla taa na -arọ nrọ maka akpụkpọ anụ nwere ahụ ike. Onye nwere ihu ọma na mkpụrụ ndụ ihe nketa,… Gaa n'ihu Ọgụgụ nnwale nke usoro ịkpụ ahụ na -enweghị mgbu
Too ya ozugbo! 10 kpakpando ndị na -adịghị aga bangs
[ad_1] Osisi Ha nwere ike ọ bụghị naanị melite ntutu na -agwụ ike, kamakwa anya na -agbanwe oke ihu. Ma ọ bụrụ na n'ọnọdụ nke mbụ enwere ohere nke ọdịda, na nke abụọ ihe niile dị mgbagwoju anya. Dịka ọmụmaatụ, bangs kwụ ọtọ agaghị adabara ụmụ nwanyị nwere ọdịdị ihu ihu, nke dị mkpirikpi ga -… Gaa n'ihu Ọgụgụ Too ya ozugbo! 10 kpakpando ndị na -adịghị aga bangs
Ụdị edozi isi 33 ga -ekpebi tupu afọ 33
[ad_1] Ịgbasa ntutu isi, bangs, mohawks, braids na ponytails - gịnị ka ịnwalebeghị? Ebe ị ga -eme ya: Ogwe akọrọ HAIRDRYER (Bolshaya Dmitrovka, 16/1, enwere ike ịhụ adreesị niile ebe a) Ọnụahịa maka nrụnye: 1 400 rubles. (ịkwa akwa), 2,000 rubles. (kwa ụbọchị), 3,500 rubles. ("Boogie Woogie"). Ogwe Brow & Mma (Bolshaya Dmitrovka, 16; Malaya Bronnaya,… Gaa n'ihu Ọgụgụ Ụdị edozi isi 33 ga -ekpebi tupu afọ 33
Ị ghọtara? Kedu ka ndị dike nke usoro ihe nkiri telivishọn si eto
[ad_1] Hit sitere na Luisana Lopilato sitere na Rebel Spirit na nke usoro onyonyo ka Claire Danes gbara n'akụkụ Jared Leto? BeautyHack na -ekpughe ihe ndị ntorobịa a ma ama nke 90 na 2000 na -eme ugbu a. Mischa Barton (Marissa Cooper na usoro onyonyo “OS - Obi Lonely”) E wepụtara ihe omume mbụ nke usoro ama ama… Gaa n'ihu Ọgụgụ Ị ghọtara? Kedu ka ndị dike nke usoro ihe nkiri telivishọn si eto
Ngwaahịa ụda ụda 6 zuru oke nke m na -azụta ugboro ugboro
[ad_1] Ohere ndị mepere emepe, ọbara ọbara, okirikiri n'okpuru anya - nsogbu ndị ama ama? Ọ na -ewe nnukwu mbọ na ego iji mepụta ụda zuru oke. M na -ekwu maka ọkacha mmasị m na ngalaba “Ruo ọdịda ikpeazụ.” Sofia Vorobyova BeautyHack Editor Na -edozi ude ihu CC Red, Erborian Mgbanwe ọrụ ebube sitere na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ gaa na agba aja aja bụ… Gaa n'ihu Ọgụgụ Ngwaahịa ụda ụda 6 zuru oke nke m na -azụta ugboro ugboro
Ndị ama ama 15 nwere nku anya zuru oke
[ad_1] NSỌdị nku anya a họọrọ nke ọma ọ bụghị naanị na-eme ka anya meghee, kamakwa ọ na-eme ka ihu dị mma. N'okwu a, ndị na -ese etemeete kacha mma n'ụwa na -adụ ọdụ ịchụso ejiji. N'agbanyeghi na obosara, nku nku na -apụtabeghị 'ịhapụ' ụwa catwalks, ụdị a ... Gaa n'ihu Ọgụgụ Ndị ama ama 15 nwere nku anya zuru oke
10 Angelina Jolie egbugbu ị kwesịrị ịma gbasara ya
[ad_1] MHa nwere ụmụ isii na onye nnọchi anya ihe ọma Angelina Jolie bụ onye na -akwado egbugbu. Ihe odide maka “ọnwụ” bụ nke izizi pụtara n'ahụ onye omee ahụ. Ka afọ ole na ole gachara, Angie kpochapụrụ ya, were egbugbu Buddha “Tai na -ekpe ekpere maka nchebe” dochie ya. Ihe niile “nka” dị n’ahụ kpakpando nwere… Gaa n'ihu Ọgụgụ 10 Angelina Jolie egbugbu ị kwesịrị ịma gbasara ya
kedu ihe kpakpando dị njikere maka ọrụ?
[ad_1] V afọ ole Bella Hadid nwetara rhinoplasty mbụ ya, kedu steeti Kylie Jenner wetara n'ọdịdị ọhụrụ ya? Maka ọrụ ọhụrụ, nkwekọrịta na ọrụ azụmaahịa, kpakpando dị njikere maka inje Botox na -adịghị emerụ ahụ na ịwa ahụ plastik siri ike. Cher Cher dị afọ 72, na ọkara nke ndị a… Gaa n'ihu Ọgụgụ kedu ihe kpakpando dị njikere maka ọrụ?
Onye na -adịghị eji ntutu isi dị mkpụmkpụ
[ad_1] Ị chọrọ ime ka onyinyo ahụ dị ọhụrụ ma ọ bụ gbanwee onyonyo a? Wepụta oge iji mee mkpebi siri ike - mgbanwe mgbanwe ntutu isi anaghị emezu ihe a tụrụ anya ya. Ọ bụrụ na ị nwere agụụ maka ịkpụ ntutu isi, buru ụzọ chọpụta ma ogologo a ọ dabara gị. BeautyHack bụ maka onye na -adịghị amasị ntutu ntutu dị mkpụmkpụ.… Gaa n'ihu Ọgụgụ Onye na -adịghị eji ntutu isi dị mkpụmkpụ
Echefula ịzụta? Top 10 ngwaahịa ọhụrụ kachasị ọhụrụ n'izu
[ad_1] Ngwa ịgba egwu fan, mmiri ifuru maka ihu, patches - ndị na -echekwa mmiri na ihe ọhụrụ ndị ọzọ n'izu a kwesịrị nlebara anya. Ịhịa aka n'ahụ megide ndakpọ aka Massage Wrinkle Remover, MIZUHI Dị irè, dị mfe, mmefu ego - nke a bụ maka ngwa mma Japan ọhụrụ MIZUHI, nke enwere ike zụta na nso nso a na L'Etoile. Anyị kwuru maka… Gaa n'ihu Ọgụgụ Echefula ịzụta? Top 10 ngwaahịa ọhụrụ kachasị ọhụrụ n'izu
Polina Gagarina na kpakpando ndị Russia ndị ọzọ felata
[ad_1] Site na egwuregwu, nri kwesịrị ekwesị ma ọ bụ nri siri ike - gịnị nyeere Polina Gagarina, Svetlana Khodchenkova, Anastasia Denisova na kpakpando ndị ọzọ aka inwe ọdịdị? Polina Gagarina Na “ụlọ ọrụ kpakpando” Polina adịghị ka ọ dị ugbu a. Na isi okwu abụghị na mgbe ahụ ọ nweghị ịkpụ ntutu na mbinye aka na platinum blond.… Gaa n'ihu Ọgụgụ Polina Gagarina na kpakpando ndị Russia ndị ọzọ felata
Hacks mara mma 18 sitere n'aka ọkà mmụta trichologist na stylist
[ad_1] Ọkammụta trichologist Tamara Berechikidze na stylist Alexei Nagorskiy na -ekwu maka otu esi elekọta ntutu gị, ụdị gị dị gịrịgịrị na enweghị olu, na -agbacha agbacha ma ọ bụ ogologo eriri dị arọ. Ogologo ntutu dị ogologo Tamara Berechikidze Nwa akwukwo nke sayensị ọgwụ, dermatovenerologist-cosmetologist, trichologist 1) Ọ bụrụ na ị nwere ogologo ntutu dị arọ, họrọ mbo osisi nwere ezigbo mbo… Gaa n'ihu Ọgụgụ Hacks mara mma 18 sitere n'aka ọkà mmụta trichologist na stylist
Kedu otu esi emezi akpụkpọ ahụ? Cosmetologist na -adụ ọdụ
[ad_1] TAsya Al-Arabi, onye ọkachamara n'ihe gbasara cosmetology mba ụwa nke DIBI Milano na Russia, gwara ka esi elekọta akpụkpọ ahụ nke ọma, gịnị bụ ihe mgbochi epidermal yana ọ ga-ekwe omume ịkwalite arụmọrụ nke ude. Asya Al-Arabi Onye na-enye ọzụzụ-cosmetologist nke klas mba ụwa DIBI Milano na Russia Gwa anyị maka nlekọta anụ ahụ kwesịrị ekwesị: otu esi ahọrọ… Gaa n'ihu Ọgụgụ Kedu otu esi emezi akpụkpọ ahụ? Cosmetologist na -adụ ọdụ
Otu esi eme ka egbugbere ọnụ gbasaa na etemeete: ndụmọdụ sitere n'aka ndị na -ese etemeete
[ad_1] Kedu ihe bụ ihe dị na gloss egbugbere ọnụ, otu esi eme mmetụta ombre, yana otu esi eji pensụl sere contour ahụ n'ụzọ ziri ezi? Hichaa egbugbere ọnụ gị wee tinye ọtụtụ ndo nke lipstick Lisa Eldridge Jiri nhicha egbugbere ọnụ tupu ịmalite etemeete. Kiko's Scrub & Peel Wepes abụghị naanị na -ewepụ ahụ akpụkpọ anụ nwụrụ anwụ,… Gaa n'ihu Ọgụgụ Otu esi eme ka egbugbere ọnụ gbasaa na etemeete: ndụmọdụ sitere n'aka ndị na -ese etemeete
nkpuchi kacha mma nwere mkpụrụ osisi
[ad_1] NSapaya, anyụ, mkpụrụ osisi strawberry, apụl na ube oyibo abụghị uzommeputa maka ire ụtọ smoothie na ọ bụghịdị ngwa nri mkpụrụ osisi, kama ọ bụ ezigbo ndị enyemaka ịma mma maka ndị akpụkpọ ahụ ha chọrọ mgbake na mmiri. Ndị editọ BeautyHack nwalere nkpuchi kacha mma na mkpụrụ osisi wee nye mkpebi ha. Ihe nkpuchi na -agbanwe agbanwe na mkpụrụ osisi na -ahazi mkpụrụ osisi… Gaa n'ihu Ọgụgụ nkpuchi kacha mma nwere mkpụrụ osisi
Nhazi akụkụ-akụkụ: ihe atụ kpakpando 15 kacha mma
[ad_1] TOP awara awara nwere ike ime ka ịkpụ ntutu ọ bụla dabara adaba, yana maka ndị nwere ntutu dị gịrịgịrị, ọ nweghị ike dochie ya. Nke a bụ ọmụmaatụ kacha mma nke ntutu isi nkewapụrụ n'akụkụ yana otu esi emegharị ya ma zere mmejọ. Wavy bob Akụkụ akụkụ ya na curls ogologo na-enye ohere ọ bụghị naanị ịkụ aka… Gaa n'ihu Ọgụgụ Nhazi akụkụ-akụkụ: ihe atụ kpakpando 15 kacha mma
Ime etemeete - ka esi emeghachi
[ad_1] Vizagist Christina Novikova - gbasara otu (ma ọ bara uru) ịme bred n'onwe gị yana ngwaahịa dị mma maka etemeete dị otú ahụ. Christina Novikova visagiste Gịnị bụ achịcha? Achịcha bụ, nke mbụ, etemeete ogbo, nke a na-eji na fim, ihe nkiri na n'elu kapeeti uhie. Ime etemeete dị otú ahụ na-amasị ndị… Gaa n'ihu Ọgụgụ Ime etemeete - ka esi emeghachi
Emeghachila! Ụdị edozi isi 25 dị egwu n'oge niile
[ad_1] DJennifer Lopez ji trape abịa na 2002 Oscars, na Kristen Stewart na -akpasu ndị na -ese foto na ndị nkatọ iwe mgbe niile. BeautyHack nwere ọtụtụ ihe ọchị na -ekwu maka ọdịda kpakpando ya na onye ọkaibe Ivan Anisimov. Ivan Anisimov onye nnọchi anya ụlọ ọrụ onyonyo stylist Embassy of Style Jennifer Lopez Na mbụ echere m na onyonyo a bụ… Gaa n'ihu Ọgụgụ Emeghachila! Ụdị edozi isi 25 dị egwu n'oge niile
Isi ihe nkiri 10 kachasị njọ site na usoro onyonyo
[ad_1] TOovarious Maiza sitere na usoro ihe nkiri TV "Clone", Esmeralda ihu abụọ sitere na "Dream Coast" na ọrụ 8 ndị ọzọ na -echefu echefu. Daniela Escobar (Maiza). Usoro “Clone” Ọrụ nke Maiza nwere aghụghọ na enweghị obi ụtọ bụ nnukwu ọrụ mbụ nke onye na -eme ihe nkiri na -amalite n'oge ahụ Daniela Escobar. Omume ahụ tụgharịrị na -enweghị mgbagha:… Gaa n'ihu Ọgụgụ Isi ihe nkiri 10 kachasị njọ site na usoro onyonyo
Kedu ka ndị na -eme ihe nkiri obi ọjọọ siri gbanwee
[ad_1] afọ iri abụọ gara aga, na Machị 5, 1999, ewepụtara mmegharị ihe nkiri nke anọ na nke kacha ewu ewu nke akwụkwọ akụkọ "Njikọ dị ize ndụ" nke Choderlos de Laclos wepụtara. Omume a sitere na narị afọ nke 18 gaa na nke 20, na kama France, New York mara mma pụtara na enyo. Mgbe ị na-eme atụmatụ ilele ebumnuche ọjọọ, BeautyHack… Gaa n'ihu Ọgụgụ Kedu ka ndị na -eme ihe nkiri obi ọjọọ siri gbanwee
Otu esi elekọta akpụkpọ ahụ gị n'oge opupu ihe ubi: ndụmọdụ sitere n'aka onye na -ahụ maka anụ ahụ
[ad_1] Nlekọta TT na iji ngwaahịa ndị na -akpali akpali n'oge oyi anaghị ekwe nkwa na akpụkpọ ahụ ga -adị ka enweghị ntụpọ na mmalite ọkụ. Kedu ihe nzuzo mara mma ga -enyere aka n'ilekọta ụdị anụ ahụ dị iche iche yana otu esi ahọrọ ngwaahịa zuru oke? Achọpụtala azịza ajụjụ ndị a… Gaa n'ihu Ọgụgụ Otu esi elekọta akpụkpọ ahụ gị n'oge opupu ihe ubi: ndụmọdụ sitere n'aka onye na -ahụ maka anụ ahụ
20 kpakpando ndị na -adịghị emekọ ihe ọnụ
[ad_1] WITHS nsogbu, aghụghọ, nyocha na Hollywood abụghị ihe ọhụrụ. Nhọrọ mma Madonna vs. Gwyneth Paltrow A na-ekwukarị onye na-eme ihe nkiri na-emeri Oscar na pop queen dị ka ndị enyi a swornụrụ iyi. Madonna na Gwyneth nwere mmekọrịta na -ekpo ọkụ ogologo oge, ha kpọrọ ọbụna… Gaa n'ihu Ọgụgụ 20 kpakpando ndị na -adịghị emekọ ihe ọnụ
30 memes ịma mma kacha atọ ọchị
[ad_1] 30 memes mara mma kacha atọ ọchị [ad_2]
10 nwunye onye isi ala kachasị mara mma n'oge niile
[ad_1] Site na ụmụ nwanyị France Brigitte Macron ruo ụmụ nwanyị mbụ nke Azerbaijan na Cote d'Ivoire. Melania trump Ajụjụ ọnụ ikpeazụ abụghị n'ọkwa nwanyị nwanyị mbụ, Melania nyere ndị America GQ na 2016. Mgbe ahụ kpakpando ahụ n'ụzọ nke ụwa kesara akụkọ sitere na ndụ wee "nwaa" ọrụ nke… Gaa n'ihu Ọgụgụ 10 nwunye onye isi ala kachasị mara mma n'oge niile
5 nnukwu ntọala maka akpụkpọ akpọnwụ
[ad_1] Ngwọta ntanetị n'ịntanetị dabere na mmiri ifuru lotus, ude mmiri BB nwere ezigbo nlekọta nlekọta yana nchọpụta ndị ọzọ maka akpụkpọ akpọnwụ-na akụkọ ọhụrụ nke onye nchịkọta akụkọ nke BeautyHack Karina Andreeva@kandreevaa… Karina Andreeva Chief Onye nchịkọta akụkọ nke BeautyHack Enwere m akpụkpọ anụ na -akpọ nkụ, yabụ aga m abịaru nso na nhọrọ ntọala… Gaa n'ihu Ọgụgụ 5 nnukwu ntọala maka akpụkpọ akpọnwụ
Nku nku anya: ka esi eme ka udi ahụ zuo oke
[ad_1] Onye na -ese ihe nkiri Vand Kelly Baker na -arụ ọrụ na Hollywood afọ 17, ebe ekwesịrị ịkpọ nwa agbọghọ ahụ "akụkọ nku anya." Ndepụta ndị ahịa ya gụnyere ezinụlọ Kardashian-Jenner, Shay Mitchell, Cardi B, Zendaya, Ariana Grande, ihe nkiri Game of Thrones na ọtụtụ kpakpando ndị ọzọ. V Ndụ Instagram Kelly bụ… Gaa n'ihu Ọgụgụ Nku nku anya: ka esi eme ka udi ahụ zuo oke
Chaị! Kedu ka ndị na -eme ihe nkiri ndị na -akpọ ụmụaka n'usoro ihe onyonyo Brazil dị ka taa?
[ad_1] V N'ime afọ 1990, ihe ntụrụndụ ọhụrụ pụtara na ndụ ezinụlọ "post-Soviet"-na-ekiri usoro onyonyo. N'ime oge adịghị anya, diski bụ ụkọ - iji chọpụta ka telenovela ga -esi kwụsị, na mgbede ọ bụla, ị ga -ewepụ ihe niile wee nọdụ na ihuenyo. Ndị dike nke… Gaa n'ihu Ọgụgụ Chaị! Kedu ka ndị na -eme ihe nkiri ndị na -akpọ ụmụaka n'usoro ihe onyonyo Brazil dị ka taa?
otu m siri nwalee Achromin izu abụọ
[ad_1] NSR Cheta ude ọcha a ma ama na nkwakọ ngwaahịa pink na beige, nke enwere ike ịhụ na ime ụlọ ịwụ nke ụlọ Soviet na post-Soviet ọ bụla? Kemgbe ahụ, akara ahụ emeela ka ihe ndị mejupụtara ya dị mma, nwee ntinye aha ọzọ wee pụta na shelves ụlọ ahịa n'ụdị emelitere (n'ime na n'èzí). Onye nchịkọta akụkọ BeautyHack Yulia Kozoliy hapụrụ ihe ọ na -emebu… Gaa n'ihu Ọgụgụ otu m siri nwalee Achromin izu abụọ
kedu ka kpakpando siri kpaa anyị aka na Eprel 1st?
[ad_1] Site na ịtụ ime tupu ịgba alụkwaghịm: BeautyHack - gbasara njakịrị ụnyaahụ nke kpakpando, nke anyị kwenyere na ya. Justin Bieber Ụnyaahụ di na nwunye Bieber kesara ozi ọma - Haley na -atụ anya ịmụ nwa. Dị ka ihe akaebe, Justin tinyere nyocha nwa ebu n'afọ: onye gbara ọsọ ikele di na nwunye ahụ, ndị ọzọ nwere obi abụọ - kedu ihe bara uru… Gaa n'ihu Ọgụgụ kedu ka kpakpando siri kpaa anyị aka na Eprel 1st?
8 Miss World nwere ọdịnihu na -atọ ụtọ
[ad_1] 8 Miss World nwere ọdịnihu na -atọ ụtọ [ad_2]
Mmehie nhazi 6 ị na -eme
[ad_1] Gini ka njigide ngwaahịa ịke nwere ike ibute, kedu otu esi ahọrọ igwe mgbokwasị kwesịrị ekwesị maka ịke, gịnị kpatara ekwesịrị ka ahapụ ntutu ka ọ ajụ oyi? Ọkachamara mba WELLA Igor Kimyashov - gbasara mmejọ ndị ị na -emekarị mgbe ị na -edozi ntutu isi gị. Ọkachamara mba Igor Kimyashov WELLA mehiere # 1:… Gaa n'ihu Ọgụgụ Mmehie nhazi 6 ị na -eme
Kpakpando 10 ndị ama ama dịka nwata
[ad_1] V Kedu ihe nkiri Angelina Jolie rụrụ mgbe ọ dị afọ 6, kedu ka Drew Barrymore si nweta ọrụ mbụ ya mgbe ọ dị ọnwa 11 na nke ihe nkiri a ma ama ị nwere ike ịhụ obere Elijah Wood? N'ime nhọrọ pụrụ iche nke BeautyHack, enwere kpakpando ndị pụtara na enyo TV mgbe ha bụ nwata.… Gaa n'ihu Ọgụgụ Kpakpando 10 ndị ama ama dịka nwata
Nsogbu adịghị? Di na nwunye 10 mara mma nke nwere nnukwu ọdịiche afọ
[ad_1] R Ọdịiche dị n'ime afọ 10, 20 na ọbụlagodi na nkeji iri na ise nke narị afọ adịghị enye kpakpando ndị a nsogbu - ha na -egosi site n'ihe atụ ha na enweghị ihe mgbochi maka ezi ịhụnanya. Na BeautyHack enwere di na nwunye kpakpando iri mara mma nke afọ anaghị egbochi ha. Nick Jonas na Priyanka Chopra… Gaa n'ihu Ọgụgụ Nsogbu adịghị? Di na nwunye 10 mara mma nke nwere nnukwu ọdịiche afọ
otu anyị siri bịa n'otu n'ime ụzọ kachasị dị irè isi wepụ ntutu
[ad_1] NSWinter, laser, ultrasonic, photo-, electro-… Na narị afọ nke 21, okwu a bụ “epilation” nwere ọtụtụ mgbanwe, anyị nwekwara ọtụtụ ụzọ mwepụ ntutu. Ugbu a enwere ike ịme ya ọbụna n'ụlọ, yana na -enweghị mgbu, mmeghachi ahụ akpụkpọ ahụ na nsogbu ndị ọzọ, na nke kachasị mkpa: nrọ ụmụ agbọghọ niile - iji tufuo… Gaa n'ihu Ọgụgụ otu anyị siri bịa n'otu n'ime ụzọ kachasị dị irè isi wepụ ntutu
Kpakpando 10 ndị ritere uru n'ịwa ahụ rọba
[ad_1] BElla Hadid, Megan Fox na Blake Lovely ekwughị ọkwa ịwa ahụ plastik n'ihu ọha. Mana amaara na ọrụ ụmụ agbọghọ ahụ gbagoro elu mgbe mgbanwe dị egwu na -adị. Kedu onye ọzọ kwesịrị ịsị ndị na -awa plastik “daalụ” - n'ime ihe ahụ BeautyHack! Megan Fox gọrọ agọ ịwa ahụ plastik na ndị ọzọ… Gaa n'ihu Ọgụgụ Kpakpando 10 ndị ritere uru n'ịwa ahụ rọba
Maria Ginzburg na Rasida Lakoba-gbasara ọrụ ọhụrụ The-Face-Only
[ad_1] NSKedu ihe kpatara ịmalite ileta onye na -achọ mma mana enweghị ike ịchọta oge? Ka ị na -atụ egwu ndị dọkịta nọ na mkpuchi mkpuchi ụlọ nyocha na injections? Wepu egwu gị: ọrụ ọhụrụ E mere naanị ihu maka gị-ndị chọrọ ilekọta akpụkpọ ahụ ha ma chekwaa oge ha. Ụdị mmapụta apụtaghị usoro mgbakasị ahụ ma ọ bụ… Gaa n'ihu Ọgụgụ Maria Ginzburg na Rasida Lakoba-gbasara ọrụ ọhụrụ The-Face-Only
Omume 5 mara mma site n'izu Ejiji Moscow nke anyị hụrụ n'anya
[ad_1] Mercedes-Benz Fashion Week Russia na-esokarị izu isi na New York, London, Milan na Paris. N'afọ a, ndị nrụpụta Yulia na Alisa Ruban, Alena Akhmadullina, Alexander Arutyunov gara ihe omume ejiji. Anyị dọtara uche gaa na usoro ịma mma ụwa, nke emegharịrị nke ọma na catwalks Moscow. Mmetụta ntutu isi otu n'ime… Gaa n'ihu Ọgụgụ Omume 5 mara mma site n'izu Ejiji Moscow nke anyị hụrụ n'anya
ihe mere ndị sonyere na ihe ngosi izizi Russia mbụ
[ad_1] V Na mbido afọ 2000, usoro ọhụrụ pụtara na telivishọn Russia - ihe ngosi n'ezie. Ọtụtụ mgbe, ọtụtụ nde ndị na -ekiri TV tụfuru ihe niile n'ihi mbipụta ọhụrụ nke "N'azụ iko" ma ọ bụ "dike ikpeazụ". Kedu ihe mere kpakpando nke ihuenyo TV, onye wuru ịhụnanya na… Gaa n'ihu Ọgụgụ ihe mere ndị sonyere na ihe ngosi izizi Russia mbụ
[ad_1] rum, mmanụ njem, ịgba ụkwụ na -agwụ ike na ihe ndị ọzọ na nchịkọta ngwaahịa ọhụrụ n'izu a. Mmanụ ntutu Tahitian Monoi, Alan Hadash Akara Alan Khadash, nke jikọtara ọdịnala Israel na teknụzụ ọgbara ọhụrụ nke Germany, pụtara na Russia n'oge na -adịbeghị anya, yabụ anyị chọrọ ichetara gị gbasara mkpokọta… Gaa n'ihu Ọgụgụ Echefula ịzụta? Top 10 ngwaahịa ọhụrụ kachasị ọhụrụ n'izu
Nhọrọ nke ndị nchịkọta akụkọ: Top 10 Mist & Sprays Face
[ad_1] Vesna! Nke a pụtara na oge maka ịkpa ike na ịdị arọ siri ike. Ihe mgbapụta na ikuku ikuku na -esote n'ahịrị. Ndị editọ BeautyHack anwalela “ezigbo ndị enyi” maka akpụkpọ anụ nwere mmiri. Ude mmiri na -egbu mmiri Glacial Spray Lotion, Skyn ​​Iceland nke onye nchịkọta akụkọ BeautyHack Anastasia Speranskaya nwalere, nlebara anya, ndị bi na megalopolises (na ọ bụghị naanị)! Chọtara… Gaa n'ihu Ọgụgụ Nhọrọ nke ndị nchịkọta akụkọ: Top 10 Mist & Sprays Face
Nhọrọ nke kpakpando: ísìsì iri na abụọ kacha elu
[ad_1] Hatalya Vodianova, Angelica Timanina, Maria Ivakova na kpakpando ndị ọzọ - maka ihe nsure ọkụ ha hụrụ n'anya kemgbe ọtụtụ afọ! Nhọrọ nke onye na -egosi TV Maria Ivakova: Eserese nke Nwanyị, Frederic Malle A na m ewere ihe osise na -ekpo ọkụ nke Nwaanyị nke Frederic Malle mere ka ọ bụrụ isi mbinye aka m - enwere m… Gaa n'ihu Ọgụgụ Nhọrọ nke kpakpando: ísìsì iri na abụọ kacha elu
Nhota kacha atọ ọchị sitere na usoro ihe nkiri TV nke 90s
[ad_1] V Na mbido 90s, ikiri ihe nkiri TV na mgbede bụ n'ezie ọdịnala na ezinụlọ ọ bụla. A manyere ụfọdụ n'ime ha ibe ákwá na inwe ọmịiko n'ebe ndị dike nọ, ụfọdụ na -achị ọchị, na -enweta "òkè" endorphins n'ọbara. Ebe ọ bụ na ịchị ọchị na -agbatị ndụ, BeautyHack achịkọtala okwu kacha mma… Gaa n'ihu Ọgụgụ Nhota kacha atọ ọchị sitere na usoro ihe nkiri TV nke 90s
Echiche manicure 12 na isi ndo nke 2019
[ad_1] TOOral Living Coral ọnụ ọgụgụ 16-1546 bụ agba agba nke 2019 dị ka Pantone Color Institute si kwuo. Mgbe ihe gbasara ngwaahịa mara mma na ndò nwere nchekwube na -enwu gbaa, anyị na -ebipụta nhọrọ ịkpụcha aka na salons, ebe enwere ike ịmegharị nke ọ bụla n'ime ha ngwa ngwa! Ebe ị ga -eme ya: Salon mma Inhype Mpaghara Mpaghara Adreesị: Moscow, 1st Smolensky per.,… Gaa n'ihu Ọgụgụ Echiche manicure 12 na isi ndo nke 2019
Ọnọdụ etemeete agbamakwụkwọ 7 maka ndị na -alụ ọhụrụ na 2019
[ad_1] Onye na -ese ihe ịchọ mma Yulia Kupriy (@kupryimakeup) gwara akụ nke dị mkpa n'oge agbamakwụkwọ a, kedu ihe mere nwanyị ọ bụla kwesịrị iji nwee ihe ngosi na pink egbugbere ọnụ na obere akpa ya. Julia Kupriy Onye na -ese etemeete nọọrọ onwe ya “Ugbua taa, ndị na -alụ ọhụrụ na -elele akwụkwọ akụkọ na -achọ etemeete agbamakwụkwọ ha zuru oke. Agba pastel na matte textures… Gaa n'ihu Ọgụgụ Ọnọdụ etemeete agbamakwụkwọ 7 maka ndị na -alụ ọhụrụ na 2019
Gịnị mere ha? Ọgba na mgbada nke ndị na -eme ihe nkiri Brazil
[ad_1] Usoro telivishọn V 90 nke Brazil nọ na elu ewu ewu ha. Ndị na-enweghị mmasị n'ihe ndị na-eme ihe nkiri a ma ama na-eme ruo afọ 15 ga-enwe obi ụtọ: ha na-abanye nkwekọrịta mgbasa ozi ọtụtụ nde dollar, mụọ ụmụ ma gaa n'ihu na-egwu egwu. Enwere kpakpando telivishọn itoolu nwere ndụ kacha atọ ụtọ na BeautyHack.… Gaa n'ihu Ọgụgụ Gịnị mere ha? Ọgba na mgbada nke ndị na -eme ihe nkiri Brazil
6 ụdịdị adịghị adị nke gbanwere ụlọ ọrụ ahụ
[ad_1] V EU abụghị naanị ụzọ iji pụọ iche na ụlọ ọrụ ejiji. Enwere ihe atụ mgbe, mgbe ị na -abanye na mkpuchi nke American Vogue, ụdị na -esi n'ala nwere nsogbu siri ike dịka agbụrụ. Ihe dị ka ụmụ agbọghọ isii nwere obi ike nwere ọdịdị pụrụ iche - n'ime ihe ịchọ mma. Beverly Johnson Beverly bụ otu… Gaa n'ihu Ọgụgụ 6 ụdịdị adịghị adị nke gbanwere ụlọ ọrụ ahụ
Isi anụ ahụ 5 na isi ísì ụtọ maka oge opupu ihe ubi
[ad_1] VSpring na Moscow dị iche na enweghị atụ: ma ọ bụrụ na ọ nwere ọkụ na mberede ma ọ dịkarịa ala +10, ihu igwe na -ekpo ọkụ (nke na -ekpo ọkụ ọbụlagodi na jaket akpụkpọ anụ) na anwụ na -achasi ike, ma ọ bụ nwee oke mmiri ozuzo na mwepu na temometa ụbọchị na-esote. Ka ọnọdụ gị wee na -awụlikwa elu, dị ka ihu igwe,… Gaa n'ihu Ọgụgụ Isi anụ ahụ 5 na isi ísì ụtọ maka oge opupu ihe ubi
Kpakpando 10 ndị gbanwere ọnụọgụ ha karịa ka amata
[ad_1] Kedu ka Jessica Simpson si tụfuo kilogram 30, gịnị bụ ihe nzuzo nke nkwekọrịta Victoria Lopyreva na gịnị nyeere Polina Gagarina aka ifelata? Ndị na -eme ememme ndị gbanwere ọnụ ọgụgụ ha ka amataghị ha nọ na nchịkọta BeautyHack. Ogologo Jessica Cypson Jessica dị 161 cm, ịdị arọ ọkọlọtọ bụ 55 n'arọ. Simpson nwere oke ibu ma nweta… Gaa n'ihu Ọgụgụ Kpakpando 10 ndị gbanwere ọnụọgụ ha karịa ka amata
Kpachapụ anya! 22 edozi isi na -emebi ntutu gị
[ad_1] Kedu ụdị edozi isi na ụdị ekwesịghị ekwesighi ime kwa ụbọchị? Na -emekọ ihe na ndị stylists. Artak Hayrapetyan, onye na -eme stylist na Beauty Stop26: 1. Combs Ụkpụrụ ịgba ihe bụ ịma ụma kpaa ntutu maka olu. Mana n'ihi nke a, a na -akpaghasị ọdịdị elu nke ntutu: akpịrịkpa kewapụrụ onwe ha, dịka… Gaa n'ihu Ọgụgụ Kpachapụ anya! 22 edozi isi na -emebi ntutu gị
Kpakpando 20 ndị na -enwetaghị ọdịda mara mma
[ad_1] Kedu ngwaahịa ndị kpakpando na -eji maka nhazi zuru oke yana otu esi emegharị etemeete Natasha Poly na kapeeti uhie? Akụkụ nke abụọ nke ihe a bụ maka ụmụ agbọghọ na -enweghị mpempe akwụkwọ mara mma. Gụọ njikọ mbụ. Akaụntụ Instagram Sienna Miller Sienna nwere naanị foto, mana enwere profaịlụ ndị ọzọ kpamkpam… Gaa n'ihu Ọgụgụ Kpakpando 20 ndị na -enwetaghị ọdịda mara mma
Ogwe 20 kachasị mma maka oge opupu ihe ubi
[ad_1] Kedu ka ị ga -esi nweta mkpuchi kacha dị mfe na nke kwushin na -ekpuchi n'okpuru okirikiri anya na ihe ịrịba ama ndị ọzọ nke ike ọgwụgwụ? Ndị na -ese etemeete na ndị na -ede blọgụ na -ekwu maka ngwaọrụ ha ji arụ ọrụ na ndụ. Victoria Moiseeva Onye na -ese ihe eji eme ihe eji eme ihe, onye na -ede blọgụ Cushion Air Fit, A'pieu Mmegharị akpụkpọ ụkwụ bidoro site na ika a, ugbu a… Gaa n'ihu Ọgụgụ Ogwe 20 kachasị mma maka oge opupu ihe ubi
Ojiji egbugbere ọnụ 20 na -ewu ewu maka blondes
[ad_1] Vizazhist Evgenia Rusinovskaya gwara ka esi achọta ndo lipstick zuru oke, wee kesaa ngwaahịa kachasị amasị ya maka ndị na -acha odo odo. Evgeniya Rusinovskaya Visagiste Mgbe ị na -ahọrọ ụcha egbugbere ọnụ, gaa n'ihu n'ụdị agba (ọkụ ma ọ bụ oyi) na ndò ntutu. Agba dị ọkụ dabara adaba maka ụmụ agbọghọ nwere ntutu na -acha ọbara ọbara; ndị dị mkpa, maka… Gaa n'ihu Ọgụgụ Ojiji egbugbere ọnụ 20 na -ewu ewu maka blondes
Ụdị edozi isi Angelina Jolie dabara onye ọ bụla
[ad_1] BeautyHack ahọrọla ụzọ edozi isi dị mfe ma dịkwa mma maka kpakpando ahụ wee jụọ stylist Anna Portkova ka o kwuo okwu na ha. Anna Portkova Trichologist-consultant Bundles, olu dị na okpueze, mwepu nkewa, ajị ajị ajị ajị ajị, bangs-stylists Angelina nwere aghụghọ dị mfe! Enwere ike ịme ihe a niile n'ụlọ, ọ bụrụhaala na ị nwere otu… Gaa n'ihu Ọgụgụ Ụdị edozi isi Angelina Jolie dabara onye ọ bụla
Sauna infrared: uru na ọghọm
[ad_1] V nwere ike iji sauna infrared n'ime ụlọ mgbatị ahụ ọgbara ọhụrụ ma ọ bụ ebe mara mma - ọ na -ewu ewu n'etiti ndị na -elekọta ịma mma na ahụike. Ebili mmiri infrared nwere mmetụta dị mma, nke na -abanye n'ime ahụ nke ukwuu, na -eme ka ọ dị ọkụ. Enweghị mmiri n'ime ụlọ ntu ahụ, nke na -abawanye ọsụsọ ma wepụ nsị… Gaa n'ihu Ọgụgụ Sauna infrared: uru na ọghọm
4 ụlọ ịchọ mma ọhụrụ ị ga -eleta
[ad_1] Oghere mara mma, ebe onye ọ bụla maara maka nlekọta anụ ahụ ihu, maka ọrụ ọhụrụ nke onye ọkaibe Yegor Ryabushko. Ụmụ nwanyị abụọ na-arụsi ọrụ ike chepụtara ihu-ihu-naanị: onye mepụtara akara Rasario Rasida Lakoba na onye guzobere yinye ime ụlọ Wax & Go Maria Ginzburg. Ha nwere ụmụ asaa maka abụọ. N'ihi ya,… Gaa n'ihu Ọgụgụ 4 ụlọ ịchọ mma ọhụrụ ị ga -eleta
Naanị ncha mara mma: nyocha ngwaahịa kacha mma na -enwu enwu
[ad_1] Ndị editọ RBeautyHack na -anwale ezigbo nku anya, ihe na -emesi ike, ntụ ntụ na ihe na -egbu maramara nke nwere ọmarịcha na -enwu gbaa nke na -ahụ site na mbara igwe. Highlighter Skin Love Glow Glaze Stick, Nhọrọ Becca nke onye isi nchịkọta akụkọ BeautyHack Anastasia Speranskaya Na Machị, Becca wepụtara nchịkọta ọhụrụ, Skin Love, nke gụnyere ngwaahịa akpọrọ gburugburu ebe obibi. Ọ nwere ihe niile… Gaa n'ihu Ọgụgụ Naanị ncha mara mma: nyocha ngwaahịa kacha mma na -enwu enwu
otu m siri nwaa usoro Dermadrop
[ad_1] Onye isi nchịkọta akụkọ BeautyHack gara ụlọ ọgwụ nke ihe ịchọ mma ọhụrụ Gen87 iji nwalee usoro Dermadrop. Kedu onye dabara maka ya enwere ike were ya dị ka analog nke biorevitalization na -enweghị mgbu? Anastasia Speranskaya Senior Editor BeautyHack Anyanwụ na -ekpo ọkụ, ikuku na -efe, batrị na -akpọnwụ - ọ bụghị akpụkpọ anụ ọ bụla nwere ike… Gaa n'ihu Ọgụgụ otu m siri nwaa usoro Dermadrop
Nhọrọ manicure 30 maka ndị na -anaghị amasị nka ntu
[ad_1] Ike gwụchara agba dị ala, mana ị dịbeghị njikere ịdọrọ Chapel Sistine na mbọ gị-ọ maara nke ọma? BeautyHack achịkọtala nhọrọ nka ntu maka ndị hụrụ ntakịrị n'anya ma gwa ha ebe enwere ike ịmegharị ha na Moscow. Naanị gosi onye nwe ya! Ebe ị ga -eme ya: Inhype salon salon… Gaa n'ihu Ọgụgụ Nhọrọ manicure 30 maka ndị na -anaghị amasị nka ntu
Ịkpụ ntutu: uru na ọghọm
[ad_1] EI ọ na -ewe oge ịhazi kwa ụbọchị? Mee ya ogologo oge na ịkpụ ntutu. Usoro a na -edozi olu na curls site na iji ihe mejupụtara pụrụ iche, ụdị ma ọ bụ curlers. Mwepu ga -adị site n'izu atọ ruo izu asatọ! BeautyHack - gbasara uru na ọghọm nke ịkpụ ntutu. Gịnị bụ ịkpụ ntutu? Carving bụ okike nke… Gaa n'ihu Ọgụgụ Ịkpụ ntutu: uru na ọghọm
Otu esi ewepu oyi na egbugbere ọnụ ngwa ngwa: na -adụ ọdụ onye na -ahụ maka akpụkpọ ahụ
[ad_1] HLet jiri akụkọ na -akụda mmụọ malite: naanị 4% nke ndị bi n'ụwa anaghị ebu nje herpes. O yikarịrị ka ị bụ ewezuga, ọ bụghị iwu, bụ nke a na -eleghara anya. Yabụ, ajụjụ iwepụ oyi na egbugbere ọnụ nwere ike ịba uru n'oge ọ bụla. Ọkachamara na-ahụ maka akpụkpọ ahụ Viktoria Britko kwuru etu… Gaa n'ihu Ọgụgụ Otu esi ewepu oyi na egbugbere ọnụ ngwa ngwa: na -adụ ọdụ onye na -ahụ maka akpụkpọ ahụ
ihe ọ dị ka na ebe ikwugharị ya na Moscow
[ad_1] Mbipụta fivory, ndò na -enwu gbaa etinyere ụma akpachapụghị anya, na -ete ya na ịgba ọtọ mara mma na ihe eserese - manicurists na ihe ngosi ejiji ejirila ụzọ niile dọrọ uche gaa na ntu ụdị. Enwere ike ịmegharị ihe a niile ugbu a na ụlọ oriri na ọ Moscowụ Moscowụ Moscow Moscow Moscow Moscow Moscow Moscow Moscow - echiche na adreesị bara uru na ihe ịchọ mma BeautyHack! Ojiji uhie dị na… Gaa n'ihu Ọgụgụ ihe ọ dị ka na ebe ikwugharị ya na Moscow
Ngwa ihu 5 m jiri kpamkpam
[ad_1] Onye nchịkọta akụkọ RBeautyHack Yulia Kozoliy - gbasara ude, nkpuchi na emulsions maka ihu dabara ya nke ọma yana, opekata mpe, kwesịrị nlebara anya gị. Moisturizing ude Botanical Kinetics Hydrating Soft Crème, Aveda Anaghị m ewere onwe m dị ka otu n'ime ndị na -akwado Aveda - ọ bụghị ngwaahịa niile dabara m, yana… Gaa n'ihu Ọgụgụ Ngwa ihu 5 m jiri kpamkpam
ihe niile gbasara ịwa ahụ plastik na Korea
[ad_1] A na -ahụta ndị dọkịta na -awa plastik TOOre dịka ndị kacha nwee ahụmahụ n'ụwa. Dị ka ọnụ ọgụgụ si kwuo, nwanyị Asia ọ bụla n'ime ise ejirila opekata mpe rụọ ọrụ ịchọ mma. N'itinye ihe ịchọ mma na ahịrị mgbakọ, ndị ọkachamara Korea emezuola nka ha, na -akwalite mmegharị ọ bụla. Ruo taa, Korea arụọla ọrụ kacha arụ ọrụ n'ụwa. Njem njem ahụike… Gaa n'ihu Ọgụgụ ihe niile gbasara ịwa ahụ plastik na Korea
Kedu otu esi ekpebi ụdị agba gị yana ọ dị mkpa?
[ad_1] Onye na-ese anwụrụ ọkụ na onye na-ese ihe-banyere uru ụdị agba nwere ugbu a yana ihe kpatara na ị gaghị adabere kpamkpam na njirimara a mgbe ị na-ahọrọ ihe ịchọ mma ma ọ bụ na-achọ ịgbanwe agba ntutu gị. Onye na -ese etemeete Christina Novikova, onye mepụtara ụlọ akwụkwọ etemeete Novikova Studio Ugbu a nkewa dị ka ụdị agba si dị… Gaa n'ihu Ọgụgụ Kedu otu esi ekpebi ụdị agba gị yana ọ dị mkpa?
Ihe ndị na -ede blọgụ na -ekwu maka ya: Nastya Swan
[ad_1] Mdress na onye na -ede blọgụ Nastya Swan - gbasara emume mara mma kwa ụbọchị, imekọ ihe ọnụ na onwe ya, nri na egwuregwu. Banyere ahụike uche Ka ị na -arụpụta ihe, ọ dị ezigbo mkpa idobe nguzozi, nguzozi nke ime na dobe echiche gị n'usoro. Omume ime mmụọ, ịrụ ọrụ na onye ọkà n'akparamàgwà mmadụ na nkwurịta okwu n'ime onwe m na -enyere m aka… Gaa n'ihu Ọgụgụ Ihe ndị na -ede blọgụ na -ekwu maka ya: Nastya Swan
Ndị na -egosi TV 11 mara mma nke ukwuu n'ime afọ 20
[ad_1] Othey nwere ike rụọ ọrụ ịme ngosi ka ọ dị njọ karịa nke Cindy Crawford, mana ha họọrọ ụlọ ihe nkiri telivishọn na catwalk. Ekaterina Andreeva, Mona Abu Hamze na ndị ngosi TV mara mma 9 ọzọ n'ime afọ 20 gara aga. Ekaterina Andreeva N'ileghachi anya Catherine, ọ dị ka mkpụrụ ọgwụ maka ịka nká ka… Gaa n'ihu Ọgụgụ Ndị na -egosi TV 11 mara mma nke ukwuu n'ime afọ 20
Ihe ngosi TV 10 kacha mma nke Brazil n'oge ị bụ nwata
[ad_1] V Na 1988, egosiri usoro ihe nkiri TV nke Brazil mbụ "Slave Izaura" na USSR. Akụkọ ịhụnanya nke Izaura dos Santos na Leoncio Almeida bụ mba buru ibu sochiri ya. Na mbido 80s, Susana Vieira, Vera Fischer, Antonio Fagundes na ndị ọzọ na -eme ihe nkiri ghọrọ "ndị otu" ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ezinụlọ niile na… Gaa n'ihu Ọgụgụ Ihe ngosi TV 10 kacha mma nke Brazil n'oge ị bụ nwata
Ngwaahịa 5 maka ụda na -enweghị ntụpọ na analogues ha
[ad_1] RAnastasia Speranskaya, onye isi nchịkọta akụkọ nke BeautyHack, nwalere ihe na -atọ ụtọ, ntọala nwere mmetụta na -enwu enwu, ihe ngosi dị ka ọla edo mmiri, yana ngwaahịa ndị ọzọ maka akpụkpọ anụ zuru oke maka mmefu ego ọ bụla. Primer Foundation maka etemeete Touche Éclat Blur Primer, Yves Saint Laurent Cheta mmetụta dị nro na ngwa ndezi foto ewu ewu? Site na mbido a… Gaa n'ihu Ọgụgụ Ngwaahịa 5 maka ụda na -enweghị ntụpọ na analogues ha
senti kacha mma n'ụdị njem
[ad_1] Arum, nke e wuru na ọdịiche dị ukwuu n'etiti swiiti owu na patchouli, amba dị mfe mana dị mma nke nwere resin viscous spruce na dobe ihe ọ juiceụ orangeụ oroma na isi ndị ọzọ dabara adaba iji soro gị gaa ezumike - lee anya na nhọrọ ọhụrụ nke Onye na -akatọ ihe na -esi ísì ụtọ Ksenia Golovanova. Eau de parfum Bergamote &… Gaa n'ihu Ọgụgụ senti kacha mma n'ụdị njem
Ihe nkpuchi ihu 9 kachasị ọhụrụ
[ad_1] Ndị na -edegharị BeautyHack nọrọ ụbọchị ahụ yi ihe mkpuchi ihu na -atọ ọchị, nke na -adịghị ahụkebe na nke na -atọ ụtọ. Anyị na -ekwu maka mmetụta anyị - onye chọrọ ha yana gịnị kpatara ya? Ihe nkpuchi afụ nwere akụkụ abụọ maka ịsacha na inye anụ ahụ nri Double Dare, OMG! Ihe nkpuchi ndị Korea Double Dare OMG! Ndị na -ede blọgụ hụrụ ya n'anya - maka ngwugwu dị egwu ya na nwanyị “nwere akara”… Gaa n'ihu Ọgụgụ Ihe nkpuchi ihu 9 kachasị ọhụrụ
Isi ísì ụtọ 15 onye ọ bụla na -arọ nrọ na ya
[ad_1] L Ihe akụkọ na -esi ísì ụtọ na ihe ọhụrụ nke ihe nsure ọkụ na -esi ísì ụtọ, nke mmiri si na mkpụrụ osisi apụta na mkpụrụ obi, dị na nchịkọta BeautyHack pụrụ iche. Eau de parfum Rose Oud, Korloff Paris Ndị France na -ekwu: “Inye Korloff bụ ikwupụta ịhụnanya gị.” Ọ baghịkwa uru ihe ọ pụtara, otu ihe ịchọ mma nwere mkposa… Gaa n'ihu Ọgụgụ Isi ísì ụtọ 15 onye ọ bụla na -arọ nrọ na ya
Anyị na -ekwu ma na -egosi: akwụkwọ akụkọ mara mma iri n'April
[ad_1] Anyị na -ekwu ma na -egosi: akwụkwọ akụkọ mara mma 15 na Eprel [ad_2]
kpakpando ndị bụ "achịcha" n'oge ọ bụ nwata
[ad_1] V nwata, "pyshechki" a ma ama kpaliri ịhụnanya n'etiti ndị ọzọ: ee, ntì ndị ahụ na -acha uhie uhie. Mgbe ha tozuru oke, ha kpebiri na oge eruola ka ewepu "ogige" wee bụrụ ọmarịcha mara mma. Ndị na -eme ememme na -ama jijiji n'oge ha bụ nwata - na mkpokọta BeautyHack. Jennifer Goodwin Ndị na -ege ntị hụrụ cutie n'anya ... Gaa n'ihu Ọgụgụ kpakpando ndị bụ "achịcha" n'oge ọ bụ nwata
Ụmụ nwanyị 15 kacha mara mma na ndọrọ ndọrọ ọchịchị
[ad_1] Site na nwanyị nwanyị ama ama nke Middle East ruo onye osote nwanyị mara mma na Brazil. N'edemede BeautyHack - Queen Rania, Ivanka, Melania Trump na ụmụ nwanyị iri na abụọ ndị ọzọ na -eme ihe niile. Melania trump N'amaghị ya, Melania malitere ọrụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị ya na 12, mgbe ọ lụrụ Donald Trump. A… Gaa n'ihu Ọgụgụ Ụmụ nwanyị 15 kacha mara mma na ndọrọ ndọrọ ọchịchị
Kedu ka esi etinye senti n'ụzọ ziri ezi?
[ad_1] NSA ọmarịcha ụzọ agaghị ahapụ ndị ọzọ enweghị mmasị, ọ ga-enyekwa gị obi ike. Mgbe ị na -eji ụlọ mposi eau de, a ga -echetarịrị na akụkụ na -ejikọ ụda na oge nke ihe na -esi ísì ụtọ. Ihe bụ isi bụ itinye mmanụ na -esi ísì ụtọ n'ahụ akụkụ ahụ na uwe. BeautyHack bụ maka otu… Gaa n'ihu Ọgụgụ Kedu ka esi etinye senti n'ụzọ ziri ezi?
Ngwa etemeete 5 ị na -eji adịghị mma
[ad_1] TOSenia Wagner na -enyocha ule n'echiche mara mma: ụmụ akwụkwọ mara mma - ise, ụmụ akwụkwọ dara ada - maka ịmaliteghachi! 1) BB ude Ị: tinye ya na ntọala dịka ụda. N'ezie, nke a abụghị mpụ - a gaghị enye gị ntaramahụhụ dị ka Raskolnikov. N'otu ọnọdụ: ọ bụrụ na ntọala bụ mgbe niile… Gaa n'ihu Ọgụgụ Ngwa etemeete 5 ị na -eji adịghị mma
ihe kpatara na ị maghị maka ya
[ad_1] Ahụ nrịanrịa, kemịkalụ ụlọ na ihe ndị ọzọ a na -atụghị anya ya mere mbọ ji agbapụ. Enweghị vitamin Ihe na -ebute mbọ mbọ nwere ike bụrụ nke ime na mpụga. Osisi nkwụ bụ ụkọ nke vitamin na microelements: calcium, vitamin D, phosphorus, silicon, iron. Site na ụkọ ha, ọ bụghị naanị mbọ na -ata ahụhụ, kamakwa ntutu na akpụkpọ ahụ. N'ime… Gaa n'ihu Ọgụgụ ihe kpatara na ị maghị maka ya
Pepemint mmanụ dị mkpa maka ntutu mara mma: ọ na -arụ ọrụ n'ezie?
[ad_1] TOolumnist BeautyHack, onye guzobere akara ịchọ mma eke (@ natureal.ua) Vita Liasota gwara ihe kpatara eji etinye mmanụ dị mkpa na ihe ịchọ mma ntutu yana ma ọ na -enyere aka itolite akwa n'úkwù. “N'ịmepụta ihe ịchọ mma, anyị na -ejikarị mmanụ dị mkpa - anyị nwere nchacha dabere na ya. Ọ… Gaa n'ihu Ọgụgụ Pepemint mmanụ dị mkpa maka ntutu mara mma: ọ na -arụ ọrụ n'ezie?
Ihe nkiri 5 ịhụnanya kacha elu nke 2019
[ad_1] NSA Mgbe ụbọchị na -agwụ ike na -arụ ọrụ, ị chọrọ izu ike na melodrama ma ọ bụ tufuo mmetụta gị site na ilele ihe nkiri gbasara ịhụnanya? Anyị na -akpọ gị oku ka ị mata onwe gị na nhọrọ anyị, nke gụnyere akwụkwọ akụkọ kacha mma nke 2019. Malite na mbido Ihe nkiri kpakpando na -adọrọ adọrọ Jennifer Lopez (gụọ… Gaa n'ihu Ọgụgụ Ihe nkiri 5 ịhụnanya kacha elu nke 2019
Isi edozi isi 18 maka ogologo ntutu
[ad_1] ebumnobi VVictorian, ihe ndị Gothic na nnwere onwe zuru oke na nhọrọ ngwa! Ihe ngwugwu dị mgbagwoju anya Ọ bụ ịhụnanya ịhụnanya Victoria a nke dị mfe ịtụgharị n'ime ogologo ntutu. Ọ bụrụ na iji nnukwu ngwa ị nọghị n'okporo ụzọ n'ihi koodu akwa ma ọ bụ mmasị onwe gị, ị nwere ike belata onwe gị na ịhụ anya ma ọ bụ… Gaa n'ihu Ọgụgụ Isi edozi isi 18 maka ogologo ntutu
Page 1 ... Page 44 Older posts
-adịbeghị anya Articles
Ihe ndị na-adịbeghị anya
Enweghị asịsa ị ga -egosi.
Nganga kwadoro site na WordPress.
Ọnọdụ gbara ọchịchịrị: